Onyinye Na-enye Kọmputa maka Ụmụaka
Weebụ & Chọọ
Best nke Weebụ
Na-agba ọsọ weebụsaịtị
Nchedo & Nzuzo
Email & Izi ozi
Atụmatụ na usoro
Atụmatụ & Atụmatụ Outlook
Gmail Atụmatụ & Aghụghọ
Yahoo Atụmatụ & Aghụghọ
Nduzi & Nkuzi
Echiche ndị dị oke
Okwusara na Desktọpụ
Egwuregwu & Video
Ngwa & Akụrụngwa
Ịwụnye & Nwelite
Ndabere & Akụrụngwa
Nchọgharị & Ịntanetị
TV & Ụlọ ihe nkiri Ụlọ
Ngwa & Ngwaọrụ
Ịzụta Nduzi Ngwa & Ngwaọrụ
PC Onyinye Maka Ụmụaka
Onyinye Kwesịrị Ekwesị Maka Ụmụaka Dịka Kọmputa
Kọmputa bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ nwatakịrị. A na-eji ha eme ihe na agụmakwụkwọ ma na-arụ ọrụ dị mkpa na ndị okenye ha na-arụ ọrụ. Ma, ọ bụghị ngwaahịa kọmputa niile ka a na-arụ ọrụ iji hụ na nwata nwere ike itinye ha. Ndepụta a na-enye ụfọdụ aro nke ihe ndị metụtara kọmputa bụ ndị kwesịrị ekwesị maka ụmụaka ndị nwere mmasị ma ọ bụ jiri kọmputa mee ihe mgbe niile.
Mbadamba ụrọ dị nnọọ mfe iji ụdị ụmụaka ahụ na-eto eto nwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị irè karịa ịnwa ịkwado laptọọpụ niile. Ugbu a, nke a abughi onyinye nke kwesiri ka nwatakiri di ka ha abughi ihe kachasi ike. Ihe nhicha ahụ na-adighi mfe ịda mbà. Ọtụtụ ihe ndị a na-emecha mee ka ha nwee ike idozi nsogbu a. N'agbanyeghị nke ahụ, mbadamba bụ ngwá ọrụ mmuta dị ukwuu maka ọtụtụ ngwa dị. Ha dịkwa oke maka ntụrụndụ na nkwukọrịta. Nke kachasị mma bụ na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke ngwanrọ maka ha emewo ka njikwa ndị nne na nna dị mma. Enwere mpempe akwụkwọ mbadamba nkume dị iche iche na ahịa malite dịka $ 100. Ọzọ "
Camcorder n'akpa uwe
Camcorder Digital Cam na GoPro. © GoPro
Kedụ banyere onye nduzi nkiri nkiri nkiri? Nwebata nke flashcorders nke na-efu ego nke mepere emepe emeghewo ụwa nke ndekọ vidio dịka onye ọ bụla. Ọ bụ ezie na e nwere ụdị ụmụaka a na-ahụ anya na-egbuke egbuke, ụmụaka na-achọ inwe ihe ndị dị ka ihe nne na nna ha ga-eji. GoPro bụ aha jikọtara ụfọdụ camcorders pụrụ iche ma dị egwu maka ime egwuregwu. The HeroPro Hero bụ ihe na-efu ma dị mfe iji igwefoto zuru oke maka ndị na-amalite na ọ na-abịa na a akpa na mmiriproof ikpe na-eme ka ọ dị ukwuu maka ụmụaka nwere ike ịbụ a bit ike na ha gia. Nyere $ 130. Ọzọ "
FinePix XP80. © Fujifilm
Mgbe video vidio dị ukwuu, mgbe ụfọdụ, ike ịme foto dị na ya nwere ike ịbụ ihe na-atọ ọchị ma na-akwụghachi ụgwọ karị. Site n'inwe ike ibipụta foto dijitalụ na nha na arụmọrụ nke ese foto dijitalụ, ha nwere ike ịme nnukwu onyinye. Ọ bụ ezie na ụmụaka nwere ụmụaka ese foto, ha na-enwekarị ọrụ dara ogbenye ma ghara ịdị ike. Kama nke ahụ, enwere m ike ịkwado mmiri na mmiri na-eyi egwu. Fujifilm FinePix XP80 bụ obere igwefoto nke nwere ihe mmetụta 16 megapixel ma bụrụ ihe mkpuchi, mmiri na-ekpuchi mmiri na ájá na-eme ka ọ dịgidere maka ụmụaka iji. Dị ka igwefoto niile ụbọchị ndị a, ọ nwekwara ike ịgbanye vidiyo 1080p. Nile nke a na ọnụahịa gburugburu $ 150. Ọzọ "
Mbadamba ụrọ - Ụmụntakịrị
Ezigbo ụmụaka na-emepụta ihe. © Genius
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado nwatakịrị mmasị na nkà, mgbe ahụ ngwaahịa dị ka Genius Kids Designer II nwere ike ịbụ ihe ị ga-atụle. Nke a bụ ngwaike ngwanrọ na ngwanrọ nke na-enye ụmụaka ohere iji ha kere ihe. Mbadamba nkume ahụ na-arụ ọrụ dịka òké ma ọ bụ mbadamba ihe ọ bụla ọzọ, ma ọ na-esokwa ụfọdụ e wuru na egwuregwu na mpempe akwụkwọ ndị na-enyere ụmụaka aka ịbịaru. Ọnụ ego dị $ 65. Ọzọ "
Mbadamba ụrọ - Ndị okenye
Mkpịsị aka na mkpịsị aka. © Wacom
Ọ bụrụ na ịbịaru mbadamba dịka Onye Na-eme Ntụrụndụ nwere ike ịdị mma maka ụmụaka, ọ naghị enwe mgbanwe maka nkà nke nwatakịrị nwere ike ịchọ. Uzo ozo eji eme ihe dika ihe di mkpa karia usoro eji eme ihe n'oru oru. Kama nke ahụ, ụmụaka ndị toro eto ga-arụ ọrụ dị mma maka obere kọmputa. Wacom Intuos Pen na Touch bụ ọnụ ala na kọmpat. Obere ebe dị elu nwere ike ịbụ ihe siri ike karị iji rụọ ọrụ ma ọ na-enye otu ọrụ ahụ na mgbanwe nke nnukwu achara mgbe ọ na-abanye na ntinye pen. The mbipụta nke Manga gụnyere Manga Studio na Anime Studio software. Mbadamba nkume ahụ nwekwara ike ime ka ngwaọrụ dị iche iche. Nyere ihe ruru $ 100. Ọzọ "
Microscope Digital Touch Deluxe. © Celestron
Enwere nwatakịrị na-amụ sayensị? Ị ga - achọ ka nwatakịrị nwere mmasị na sayensị? Igwe microscope Celestron di na ntanetị bụ nnukwu nhọrọ maka iji kọmputa. Ọ na-egosipụta ngwaọrụ microscope ngwa ngwa nke na-eme 10x ka ọ bụrụ magnification 40x. Mee igwefoto USB 2 megapixel site na komputa gaa na microscope ma jiri ngwanrọ enyere iji weghaa ihe oyiyi ma ọ bụ mee ka ọnụọgụ redio dị na 150x. Ọ dakọtara na kọmputa Windows na Mac. Ọnụ ego dị $ 50. Ọzọ "
Igwe igodo ụmụaka
Kọlọtọ Kọlọtọ. © Chester Creek
Ka anyị chee ihu na ya, obere ụmụaka nwere nsogbu site na iji bọtịnụ ọkọlọtọ. Ihe kpatara ya bụ na igodo anaghị etinye aka n'akwụkwọ ọ bụla iji mee ka ọ dịrị ha mfe ịchọta igodo kwesịrị ekwesị. Ha na-enwekwa oke ibu iji jiri obere aka ha mee ihe. The lessonBoard si Chester Creek Technologies e mere kpọmkwem na ụmụaka n'uche. Keyboard na-enye igodo dị iche iche iji nyere ụmụaka aka ịmata ọnọdụ dị iche iche na ọnọdụ aka maka ide aka. Ọnụ ego dị $ 30. Ọzọ "
Laptọọpụ akpa ahia nke ndu
Otu esi ehichapu ugbo ikuku
Onyinye Kọmputa maka PC Gamers
Ọnwụ nke Ngwá Ọrụ Nyochaa Kọmputa
Akụkụ Mice Mkpa 5
Mkpapụta Ngwaọrụ Kọmputa Dị Mkpa
Software ma ọ bụ Akụrụngwa na-adabere RAID maka Mpụga Mpụga gị
Bọkspeet Desktọpụ, DVD na Blu-ray Nduzi Onye Ịzụ
Usoro nhazi nke otutu: Ọ dị mma karịa mgbe niile?
5 Ụzọ PS Vita bụ ihe egwuregwu na-achọ na akpa ebe
Esi ewegharịa foto na omenala omenala na iPad
Esi chebe okwuntughe gi site n'inwe ike
Song Exorter Pro iPhone App Review
Ụkpụrụ HSPA +: Enwetara 3G
New & Ọzọ
Esi na Usoro Nsogbu Nsogbu
The 9 Best TV guzobere na Buy na 2018
Ịkwado LTE Kwesịrị Ekwado Gị na Smartwatch?
Iji Voice Voice anya na iPhone
The 8 Best SD kaadị ịzụta na 2018
Nyochaa Nchekwa Ntanetị Online na Bitcasa
9 Free iPhone & iPod touch Texting Apps
Nyochaa: Kpoo Bluetune Bean Portable Speaker
Mgbe Amazon Echo, Fitbit & Usoro ndị ọzọ bụ Ndịàmà na-egbu
Olee otú iji tụọ ozi na iPhone na iPad Mail App
Aha Yellow - YP.com
Kedu ụdị ọdịdị ọdịyo ọdịyo dị iche na ihe nke a bụ maka ndị na-ege ntị
Ụlọ ihe nkiri Ụlọ
Kedu Enyemaka Nkwado na Nkwado Universal Search na Apple TV?
Kedu ihe bụ Ịdekọ Software?
SoftRAID Lite 5: Mac Mac Mac
Kedu ihe bụ TV TV?
Otu esi emeghe faịlụ nke enweghi ike izoputa na Photoshop
© 2022 ig.eyewated.com